Posted by Fros on May 22, 2014
၁. တရုတ်တန်း ကိုကိုညီညီ ထမင်းကြော်ဆိုင်က ဝက်သားကြော်နဲ့ ချဉ်ပေါင်ကြော်
၂. ၁၅လမ်းထိပ် ကိုဆယ်သန်းဆိုင်က ဝက်သားလုံးယိုးဒယားဟင်းချို
၃. ဆင်မလိုက်လမ်းဆုံက ဝက်သားစပယ်ရှယ်ထမင်းကြော်
၄. လှည်းတန်းဗဟိုလမ်းက ပြည် ဒေါ်ဥထမင်းသုပ်နဲ့ ဆိတ်သားကြော် ဆိတ်သားလုံးကြော်
၅. ဝက်လယ်သမားဟင်း သဘောင်္သီးထောင်း@ ပန်းစွယ်တော် Thai Express
၆. မင်းလမ်းမုန့်တီ က ရေချိုပုဇွန်မီးဖုတ်သုပ် နဲ့ ငရုပ်သီးငါးပိဖျော်....
၇. မြေနီကုန်း ရှမ်းကုန်းလမ်း သီရိဝဏ်းတား က ယိုးဒယားဝက်သားသုပ်
၈. ဆာ့ခုမ် အမဲလျှာနဲ့အမဲခြောက်ထောင်း
၉. Green Curry Seafood Spaghetti @ Coffee Circle
၁၀. တောင်ဥက္ကလာ အောင်ရတနာဆေးခန်းနားက လရောင် အသုပ်စုံ
၁၁. Signature သီးစုံပျားရည် ဒိန်ချဉ်
၁၂. အင်းယားလမ်း KKS အသားကင်
၁၃. 369 က ပြည်လုံးချမ်းသာ ဝက်နံရိုးကြော်
၁၄. ရွှေဂုံတိုင် မအင်ဟုန် ကတ်ကြေးကိုက်
၁၅. ၁၂ လမ်း မောင်မြင့် အူပေါင်း
၁၆. ဗန်မော်ငါးမျှစ်ချဉ်ခေါက်ဆွဲကောင်းမှကောင်း @ မလိခူး
၁၇. ကန်လမ်း လျှာဂျွမ်းပြန် ကော်ရည် ဆီချက် ငါးပိထောင်း
၁၈. Sushi @ Samurai
၁၉. ယူဂျီးနီးယား ရေခဲမုန့်ကြော်
၂၀. Keco ပုစွန်ဟွာ ဟော့ပေါ့
၂၁. နှစ်ယောက်တစ်ပွဲမှ ပိုအရသာရှိတဲ့ ရွှေထူးမိုးပျံခေါက်ဆွဲ
၂၂. မြေနီကုန်း ဒေါ်တင်ရီ ဘဲဥမွှေကြော်
၂၃. Tokyo Fried chicken
၂၄. လမ်း၂၀ ဆန်ပြုတ် ဘဲခြေသုပ် အသဲမြစ်သုပ်
၂၅. ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း မြစ်ကြီးနား ဆန်စီးခေါက်ဆွဲ
၂၆. Pepper Beef steak
၂၇. ရွှေမန်းရုံ အောက် အဘိုးကြီးဝက်သားတုတ်ထိုး
၂၈. Shake လက်ဖက်ကြက်ဥ ကော်ရည်
၂၉. ၅၁လမ်း မော်တော်ပီကယ်ရုံးဘေးက အမဲနှပ်နဲ့ ထမင်းကြော်
၃၀. သံဈေးငွေသိန်းက နက်စ်အော်စွန်း
၃၁. အိမ်ကြီးလမ်းရေကျော်ဈေးက အစ်ကိုကြီးချက်တဲ့ ရွှေလက်ရာမုန့်ဟင်းခါး
၃၂. ကျောက်မြောင်းက ....မန္တလေး..... ရှောက်သီးသုပ်နဲ့ကြာဇံချက်
၃၃. ဗိုလ်ရာညွန့်လမ်း စကော့ဈေးကုန်းတံတားအဆင်းက သာခွေယိုင်
၃၄. နှီးခွက်လေးနဲ့ငါးပေါင်း အရမ်းကောင်းတဲ့ the ritz
၃၅. ပုစွန်ပေါင်မုန့်ကပ်ကြော် ဝက်ကချင်ချက် @ space bar
၃၆. စကော့ဈေးကုန်းတံတားအောက် အကျိဆိုင်က ဝက်အူစုံ ဘဲဥ ခေါက်ဆွဲ
၃၇. စကော့ဈေး စားသောက်တန်း ဦးကြွိဆီချက် နဲ့သံပုရာရည်
၃၈. စကားဝါ ကြေးအိုး
၃၉. ရွှေတောင်တန်းလမ်း ဒေါ်ချွန်း ကော်ပြန့်စိမ်း
၄၀. မနက် ၉း၀၀ နာရီအပြောင်ရှင်းတဲ့ ယုဇနပလာဇာနားက အဘွားကြီးအစုံသုပ်
၄၁. ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားလေးလမ်း ဘဲသားမုန့် ကော်ပြန့် 
၄၂. ၁၂း၀၀ နဲ့ ၄း၀၀ နာရီအတွင်းပဲရတဲ့ ၁၆၅ လမ်းထိပ်က အသုပ်စုံ အာပူလျှာပူ ကြာဇံချက်
၄၃. ရန်ကင်း ဝဆန်းသီး ချစ်တီးထမင်းဆိုင်ကြက်ကြော်
၄၄.လေးထောင့်ကန်လမ်း ILBC နားက ဟင်းရည် ကပ်စီးနည်းတဲ့ မုန့်ဟင်းခါး
၄၅. သီရိမင်္ဂလာဈေး အီကြာကွေး ပဲပြုတ်အစာသွပ်
၄၆. ရေကျော်မောင်အေး စမူဆာ
၄၇. စိတ်တိုင်းကျ ဆိတ်စွပ်
၄၈. လပ်ကီးဆဲဗင်း နံရိုးပေါင်းမန်ထို
၄၉. ချယ်ရီမန်း ဆိတ်ကင်
၅၀. လမ်း၂၀ ဂဏန်းကော်ကြော်
၅၁.စိန့်ဩဂတ်စတင်းကျောင်း ရှေ့ စစ်တပ်ဝင်း အကြော်ဆိုင်က အာလူးကတ်တလိပ်ကြော်
၅၂. တောင်လုံးပြန် ကမ်းနားက ပဲကြော်
၅၃. TTC ကျောင်းဆင်းရောင်းတဲ့ ဖက်ထုပ်ကြော်
၅၄. မြေနီကုန်း ကြက်တန်း ဒီဇင်ဘာ ကုလားလက်ဖက်ရည်ဆိုင်က ပဲဟင်းအာလူးပူရီ
၅၅. Sport Bar ပုစွန်အစိမ်းသုပ်
၅၆. မေးလို့မသိရင် ရေကျော်သားမစစ်တဲ့ ဒေါ်မြလေးမုန့်ဟင်းခါး
၅၇. တာမွေ ဦးချစ်မောင်လမ်းက ရှီမို ဝက်အူစုံ
၅၈. စပါးရှားလမ်း အာလူး ဇကာကွက်ကြော်
၅၉. ရွှေမြို့တော်က ဆိတ်ဦးနှောက်
၆၀. ကန်တော်ကြီးက ပုံးလေးနဲ့ရောင်းတဲ့ ယိုးဒယားရေခဲချောင်း
၆၁. ရွှေလီ မာလာငါး
၆၂. ကြက်လျှာစွန်း ဒံပေါက်
၆၃. ယူနန်အသားကင်ဆိုင်က ငါးခဲပတ်ကင်
၆၄. ဝင်္ကဘာလမ်း မိုးကုတ်ဒေါ်ရှန် နန်းပြားသုပ် ငါးထမင်းနယ်
၆၅. Legacy ယိုးဒယားဂဏန်းချက်
၆၆. ကန်ရိပ်သာလမ်း ချစ်တီးထမင်းဆိုင်
၆၇. ကြည့်မြင်တိုင် ကျောင်းကြီးလမ်းထောင့် ဝက်သားကြော် ရခိုင်မုန့်တီ
၆၉. ၁၀၀တန် ဆူးလေကျောက်ကျော
၇၀. တိုကျိုဒိုးနပ်မျက်နှာချင်းဆိုင်က အသုပ်စုံ
၇၁. ပုစွန်တောင် ကာဆင်ဘိုင်ကြက်သားသုပ်
၇၂. ရွှေဘဲ ခေါက်ဆွဲကြော်
၇၃. western park ဂျုံပြားနဲ့ဘဲကင် ကြာညို့ငရုပ်ချဉ် ကြက်သွန်မိတ်
၇၄. မေတ္တာညွန့်ဇာတိဂုဏ်လမ်းက အရမ်းညစ်ပတ်တဲ့ အပျိုကြီး ရခိုင်မုန့်တီငါးဖယ်အစာသွပ်
၇၅. စမ်းချောင်းသူဌေးမင်း ပဲပလာတာ
၇၆. ၄၉လမ်း အပေါ်လမ်းထိပ်က သကြားပလာတာ
၇၇. ၁၃လမ်းထိပ်က သီးစုံUSA
၇၈. မိန်းထဲက ဦးငယ်လေး ပဲပြုတ်ထမင်းကြော် ငရံ့ခြောက်ဖုတ် ဆတ်သားခြောက်ဖုတ် FOC ချဉ်စပ်ဟင်းရည်
၇၉. ၃၆လမ်း မွန်မွန် မုန့်ဟင်းခါး
၈၀. အင်းယားလမ်းထိပ် friendship က ဂုံးသုပ် ဆိတ်ပေါင်းစပ်ပေါင်မုန့်
၈၁. ရွှေမြို့တော် ကူဖီးရေခဲချောင်း
၈၂. မနက်အစောကြီးရောင်းတဲ့ ရွှေပလောင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဘေးက အရမ်းသဘောကောင်းတဲ့ အဘွားကြီးရောင်း ကောက်ညင်းပေါင်း ငချိပ်ပေါင်း ဆီထမင်း
၈၃. သိမ်တော်ကြီးဓမ္မာရုံမျက်စောင်းထိုး က မနက် ၃း၃၀ စရောင်းတဲ့ တရုတ်ကြီးထမင်းကြော်ဆိုင် ဝက်သားဟင်း
၈၄. လှည်းတန်းဈေးက ကြက်ကင်
၈၅. signature က စက်နဲ့ရောင်းတဲ့ ရေခဲမုန့်
၈၆. မြေနီကုန်း မူလလက်ဟောင်း ဦးကျော်ထမင်းပေါင်း
၈၇. ဖျာပုံလမ်းအောက်ဘက်ထိပ်က အခေါက်ကင်သုပ်
၈၈.frolick ဒိန်ချဉ် ရေခဲမုန့်
၈၉. အင်းယားလမ်း Sakura Residence က the best burger in town
၉၀. YKKO အာလူးထောင်း
၉၁. မြောက်ဥက္ကလာ မယ်လမုဘုရားနားက ရွှေအိမ်စည် အခေါက်ကင် နံကင် ဆေးဘဲဥသုပ်
၉၂. တရုတ်တန်း ၁၈လမ်းထိပ်က ဆွေသဟာခေါက်ဆွဲပြုတ်ကြော်
၉၃. သိမ်ဖြူလမ်းနဲ့အနော်ရထာလမ်းထောင့်က ဆလပ်ရွက်တွေတောင်လိုပုံထားတဲ့ ဘူးသီးကြော်ဆိုင်
၉၄. 77cheese cake
၉၅. လမ်း၂၀ ထိပ် ဝက်သားပေါင်း
၉၆. Sharky အမဲသားကင်
၉၇.Thai Kitchen တုံယမ်းနို့ စိမ်းဟင်းချို သင်္ဘောသီးကြော်သုပ်
၉၈. ၃၇ အောက်လမ်းက မောင်ငွေ ထမင်းပေါင်း
၉၉. Oriental House Dim Sum နံရိုးဟင်း နိုင်လွန်ပုစွန် ဘဲဥငံ ဝက်သားပေါင်း
၁၀၀. ၁၉လမ်း နို့ဆီခွက်ကြက်ဥပေါင်း
၁၀၁. ၃၈ လမ်းထိပ် အနော်ရထာလမ်းမက ဝက်အူစုံကြာဇံ